Tapaka Ny Hevitr’Ilay Lehilahin’ny Vaovaon’i Kremlin Fa Fotoana Izao Hitenenana Hoe “Daesh” Fa Tsy “ISL” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2015 4:47 GMT
Dmitry Kiselyov. Sary avy amin'ny Kremlin.ru, 17 Aprily 2014. CC 4.0
Nanjohy ny adihevitra erantany mikasika ny tokony hiantsoana ny sampana Al Qaeda izay tonga mba hifehy ny faritra midadasika ao Iraka sy Siria ny mediam-panjakana Rosiana. Fantatry ny ankamaroan'ireo mpamaky amin'ny Teny Anglisy hoe ISIS (ny “Fanjakan'ny Silamo ao Iraka sy Siria”), io fikambanana mpitolona io, na tsorina hoe “ny Fanjakana Silamo”. Ao Rosia, antsoina hoe ИГИЛ ilay vondrona (endrika Rosiana ho an'ny ISIL, na “Fanjakana Silamo ao Iraka sy ny faritra Mediterane”) na fotsiny hoe ИГ (“IG,” izay midika ao Rosia ho “Fanjakana Silamo”). Tahaka ilay mediam-baovao Frantsay, ny maro amin'ireo mpanao gazety any amin'ny tontolo Arabo, sy ny ankamaroan'ireo mpitatitra vaovao amin'ny firenena hafa, eo ampikisahana hanome anaram-baovao ho an'ilay vondrona i Rosia ankehitriny, fanekena ny anaram-petaka arabo ho an'ny ISIS, “Daesh”, izay noraisin'ilay vondrona ihany ho sahala amin'ny fanimbazimbàna.
Inona no nitarika ny fanovàna tampoka ny politika Rosiana momba ny media? Ireo izay nisafidy ny teny “Daesh” fa tsy ny “ISIS” sy “ISIL” dia manana an'i Dmitry Kiselyov, izay voalaza fa “lohan'ny mpanao fampielezankevitra” ao Rosia, hisaotra ny fanovàna. Kiselyov, izay mitarika ny Rossiya Segodnya, masoivohom-baovao iraisampirenena an'ny governemanta, nampiditra ilay teny vaovao ny alahady 29 Novambra teo, nandritra ny fampahalalam-baovaony isan-kerinandro, izay alefa amin'ny fahitalavitra nasionaly. Ny ampitso maraina, nilazàny ny tao amin'ny gazety Komsomolskaya Pravda fa hanova miandalana ny teny “ISL” ho “Daesh” ny Rossiya Segodnya any anatin'ireo tatitra momba ilay fikambanana.
Nitanisa ireo antony maro mitondra ho amin'ny fanovàna i Kiselyov. Ireo mpanao gazety erantany, anisan'izany ireo fampahalalam-baovao Tandrefana, hoy izy nanazava, dia nirona ho amin'ny teny “Daesh” avokoa. Notsindriany koa fa mampiasa ny teny Daesh koa ny fanjakana Frantsay (saingy tsy nolazainy fa efa herintaona mahery izao no nampiasàn'i Frantsa io teny io). Farany, nitanisa ny fangatahana iray avy amin'i Russian Grand Mufti Rawil Gaynetdin i Kiselyov, izay nangataka fivoriana miaraka tamin'ny parlemanta Rosiana, tsy ela akory izay, mba hanaikena ny hoe “Daesh” fa tsy “ISL”. (Eny tokoa, efa im-betsaka nitakiana izany ny Filankevitr'ireo Muftis ao Rosia nandritry ny valo volana lasa.) Milaza ireo filoha mpitarika ny silamo ao Rosia, fa ny fanovàna ny fomba fiantso dia hanàla ny teny iray izay manamafy tsy nahy ny hevitra hoe voajanahary ny herisetra ataon'ny silamo.
Fa nahoana no amin'izao fotoana izao vao mamaly momba ireny fivoaran-draharaha ireny i Kiselyov ?
Hatramin'ireo fanafihana tao Parisy ny 13 Novambra, nanatevina ireo ezaka entiny maneho ny fiarahany tsy azo tsinontsinoavina amin'i Frantsa any Siria i Rosia. Ohatran'ny mizotra tsara hatreto. Ny 26 Novambra teo, nitsidika an'i Maosko i Francois Hollande, Filoha Frantsay, izay nifanakalozany hevitra tamin'i Vladimir Putin mikasika ny fomba hampivelarana bebe kokoa ny fiarahana manohitra ireo vondrona milisy ao Siria.
Nandritra ny fandaharany tao amin'ny fahitalavitra, nampiasa ny fivakisan'ny firenena Tandrefana amin'ny resaka Daesh/IGL koa i Kiselyov hanaovana hetsika amin'i Torkia (izay avo dia avo ny tosidrà eo amin'izy ireo, taorian'ny tranga tany amin'ny sisitanin'i Siria), tamin'ny filazana fa mampanahy be ny fomba fandrain”ireo mpikambana amin'ny OTAN ny ady ao Siria ho “mifangaroharo be”. Teo amin'ilay fandaharana, nihilana nankany amin'ny tantara iray mikasika ny fividianan'i Ankara solika tamin'i ISIS izy, nanambara fa manohana ny asa fampihorohoroana ao Siria i Torkia. Etsy andaniny, andro monja taorian'izay, tany Parisy, nolazain'i Vladimir Putin ampahibemaso fa herinandro lasa izay dia nadarabok'i Torkia ny fiaramanidina Rosiana mba hiarovany ny fandraharahana solika amin'ireo mpampihorohoro.
Iray tamin'ireo olona voalohany mba nahita hoe ny fandaharana alahady alina nataon'i Kiselyov dia nanamarika fiovàn'ny indostrian'ny fampahalalambaovao manerana an'i Rosia i Alexey Kovalev, izay mitantana ny tambanjotra mpanohitra-fampielezan-kevitra Noodleremover.news. Araka ny voasoratra tao amin'ny Facebook ny 29 Novambra teo, notateriny fa manomboka mandefa naoty milaza ny fanovàna mikasika ny “ISL” ho “Daesh” ireo olo-malaza ambony ao amin'ny vaovaom-panjakan'ny Rossiya Segodnya . Efa voasivana sahady ny fanapahankevitr'i Kiselyov, manerana ny fitantanana ny mediam-panjakana ao Rosia. Ny 30 Novambra, nanamafy teo amin'ny pejy Facebook-n'i Kiselyov i David Burghardt avy amin’ny RIA Novosti fa naharay naoty izy mitanisa ny fanovàna mikasika ny teny ISIS, izay mihatra ho an'ireo famoaham-baovaom-panjakana rehetra.
Efa nanokan-tena ho an'ny fiampitàna tsikelikely ny RIA Novosti (izay ny Rosia Segodnya no mifehy azy) raha ireo lahatsorany farany no jerena, amin'ny fampiasana ny voambolana “Daesh” miaraka amin'ny naoty fanazavana. TASS, sehatr'asa iray hafa fampahalalam-baovao fehezin'ny fanjakana ihany koa no sahala amin'ny efa nanova ny voambolana ampiasainy. Raha toa ka maro amin'ireo seham-pamoaham-baovao tsy miankina, toy ny Lenta.ru, RBC, Slon, Dozhd, sy ny Kommersant, no mbola tsy naneho marika mikasika ny fanovàna ho “Daesh”, ireo fandefasam-baovao mpomba an'i Kremlin LifeNews sy Izvestia milaza fa efa telo volana izao no andalam-pitadiavana fomba ry zareo mikasika ny hanalavirana ny fomba fiantso hoe “Fanjakana Silamo” avy amin'ny Silamo. Araka ny voalazan'ny Tale Mpanatanteraky ny LifeNews Anatoly Suleimanov, ny 30 Novambra dia nandray fanapahan-kevitra nony farany ny mpiandraikitra ny famoahana, Aram Ashotovich, mba handany ny voambolana hoe “Daesh”, nampahafantatra ireo mpiara-miasa aminy mikasika ilay fanovàna , iray andro taorian'ny fanambaràn'i Kiselyov.
Tsy isalasalana fa zava-dehibe ny adihevitra mikasika izay ho fiantsoana ilay fikambanana izay naka ny fifehezana ny faritra atsinanan'i Siria sy ny andrefan'i Iràka. Tsy mahagaga raha izahay ato amin'ny Global Voices ihany koa dia niady hevitra mikasika ny raharaha. Ny tena marina, ao amin'ny lahatsoratry ny Community Blog nosoratan'i Sahar Habib Ghazi, tonian-dahatsoratry ny GV , tamin'ny faha-20 n'ny volana jolay, nandefa ny adihevitra anatiny nataonay mikasika io fifandreseana lahatra momba ny fiantsoana io izahay.
Manome toky endri-javatra roa fara-fahakeliny ho an'i Rosia ny fikisahan'ireo famoahambaovaon'i Kremlin ho amin'ny “Daesh”. Ny voalohany, mety ho io no ho fialantsinin'ireo mpanao gazety mba hialàna amin'ny fepetra raikitra mahasorena apetrak'ireo mpanao sivana ao amin'ny governemanta federaly, izay mitaky ny hilazan'ireo mpanao gazety – isaky ny lahatsoratra mikasika ilay vondrona – fa ny “Fanjakana Silamo” dia “voaràra ao Rosia tahaka ny fikambanana mahery fihetsika”. ( mankasitraka an'io tombondahiny io i Kiselyov izy tenany). Ny faharoa, ary tena manan-danja tokoa, mety hampibaribary ny taàna-maherin'i Kiselvyov amin'ireo fampahalalambaovao ao Rosia ny hafainganana sy ny filaharana izay hanovàn'ireo famoaham-baovao samihafa ny voambolana ISIS fiantsony, ny fahefana goavana izay feno roa taona amin'ity volana ity no napetrak'i Poutine ho eo ampelatanany .